२०७६ चैत ११ गतेबाट नेपालमा लकडाउन सुरु भएलगत्तै विभिन्न पेसामा ठूलो हानि नोक्सानी पु¥यायो । अझ भनौ विश्वभरि नै महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विभिन्न क्षेत्रलाई असर गर्नुको साथै मनोरञ्जन क्षेत्र पनि अछुतो रहन सकेन । २०७७ साउनपछि लकडाउन खुलेसँगै... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौँ । भारतको पूर्वोत्तर राज्य असमकी साहित्यकार रूमी लस्कर बोराद्वारा असमिया भाषामा लिखित तथा डा. सरिता शर्माद्वारा अंग्रेजी भाषामा अनूदित उपन्यास ‘डम्फु’ काठमाडौंमा विमोचन गरिएको छ । लेखिका बोरा र अनुवादिका डा. शर्माको उपस्थितिमा बागबजारस्थित सिटी म्याक्स सिनेमाघरमा नेपाली वाङ्मय... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौ । खर्पु शेर्पा जापान राजधानी टोकियोमा शेर्पा ग्रुप खोलेर बसेका छन् । जापानको विश्वविद्यालयमा समेत कार्यरत शेर्पा म्यानपावर अर्थात् मान्छे ओसारपसारमा पनि संलग्न हुने गरेको बताइन्छ । खर्पुले जापानमा आर्जित उनको हैसियतमा राजनीतिक नेताहरूलाई प्रभावमा पारी लाक्पा शेर्पाले जस्तै... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । एकीकृत पार्टी गठनको २० महिनापछि बल्ल नेकपामा दुई वरिष्ठ नेताको वैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वपार्टी प्रमुखद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाललाई सम्बोधन गर्नेगरी दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले दुई वरिष्ठ नेताको व्यवस्था गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीले विधान... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली अर्थतन्त्रमा कालो बादल मडारिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा देखिएको सुस्तता र घट्दो रेमिट्यान्सका कारण पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि घट्दै गएको मात्रै छैन, त्यसले दीर्घकालीन असर पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । आर्थिक... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका डीआईजी विश्वराज पोखरेलले सनकको भरमा गरेको एउटा निर्णय प्रहरीका अधिकृतदेखि जवानसम्म असन्तुष्ट भएका छन् । नेपाली सेनामा प्रयोगमा आएर पनि असफल भइसकेको प्रणाली नेपाल प्रहरीमा पनि लागू गर्ने उनको निर्णय सुरुबाटै विवादित बनेको छ... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । “बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि” भन्ने मूल नाराका साथ आम जनतामा केन्द्रित बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एन आई सी एशिया बैंकले आफ्ना निक्षेप योजनामा आम ग्राहकहरुलाई थप फाईदाहरु पस्कदैं न्यू सुपर चमत्कारिक निक्षेप योजनाहरु... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल आजको ५४ दिनपछि अवकाश हुने भएपछि अनेक खालका खुद्रा षड्यन्त्रमा लाग्न थालेका छन् । उनले विशेष परिस्थितिमा सरकारले आफ्नो अवधि ६ महिना थप्न सक्ने सम्भावनाका अड्कलबाजी मिसिएको मनोगत प्रचार गराउँदै हिँड्ने मात्र होइन, त्यति... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । भारतले गरेको लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुराको सीमा अतिक्रमणलाई कूटनीतिक ढंगले कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अलमलिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग कात्तिक अन्तिम साता सरकारी निवास बालुवाटारमा लामो छलफल गर्दै... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको मुनाफा घट्नुमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नविकरणबापत दोस्रो अवधि (२०७१–२०७६ सम्म) को दस्तुर रकम रु. २० अर्बमध्ये पहिलो किस्ताको रु. ४ अर्बको खर्च तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको आयमा लाग्ने करको दर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशतमा वृद्धि... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलले पछिल्लो समय इन्सपेक्टरको सरुवा गर्दा व्यापक चलखेल भएको पुष्टि भएको छ । यसअघि डीएसपीदेखि डीआईजीसम्मको सरुवा सकिसकेको सशस्त्र बलले केही दिनअघि इन्सपेक्टरहरूको सरुवा निकाल्दा व्यापक चलखेल भएको हो । साउन सुरुमै हुनुपर्ने इन्स्पेक्टरहरूको सरुवा भदौ... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । कवि रुवि सत्यालको कविताकृति ‘अछुत जून‘ र मुक्तककार देवेन्द्र केसी देवुको मुक्तककृति ‘मनको पहिरो‘ एकसाथ लोकार्पण गरिएका छन् । लोकार्पित कृतिमाथि समालोचक महेश पौड्यालले आफ्नो भनाइ राख्दै रुबीका कवितामा विश्वजनिन चेतना, सामाजिक, राजनीतिक विचलन, मानवीय चेतना र व्यवहारमा... पुरा पढ्नुहोस्
भक्तपुर जिल्लामा बग्ने मध्यपुर–थिमि र सूर्यबिनायक नगरपालिकाको सिमानाको रूपमा अवस्थित हनुमन्ते खोलाको सुन्दरनगर खण्ड विगत ८ वर्ष अगाडिदेखि चर्चाको विषय बन्दै आएको छ । यस क्षेत्रको हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक बहाव सार्न १२ पटकसम्म असफल प्रयास भएका छन् । विना अख्तियारी... पुरा पढ्नुहोस्
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले नयाँ पेट्रोलपम्प थप्ने बहानामा आर्थिक चलखेल सुरु गरेको छ । नयाँ पेट्रोलपम्प सञ्चालन गर्न देशभरबाट ९ सय ३९ आवेदन परेकोमा छनोटका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू चलखेलमा लागेका हुन् । तर पम्पको अन्तिम... पुरा पढ्नुहोस्
हामी त्यो नागरिकहरु हौं कि देशभित्र हामीबिरुद्ध बनेका अथवा बनाइएका असमानपूर्ण धाराहरु पटक–पटक बदलेका छौं । अस्वीकार गरेका छौं । च्यातेर नयाँ लेखेका छौं । तर, सँगै त्यो देशका नागरिक पनि हौं कि नेपालको अपमान र नेपालीहरुको शोषण हुने गरी... पुरा पढ्नुहोस्